Karaan Ameerikaa maqaa Oromootiin moggaafame
Date: September 11, 2015Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, 11 Fulbaana 2015) Hawaasti Oromoo Ameerikaa magaalaa Minneapolis jiraatan karaa maqaa Oromootiin waamamu argatan.
Odeessi nu gahe akka ibsutti, maqaan “Oromo Street” jedhu kun kan kenname gaaffii kanaan dura miseensi bulchiinsa magaalaa Minisotaa, Abdii Warsamee dhiyeesseen ta’uun beekameera.
Maqaan kun yeroo ammaa magaalaa Minneapolis kan “Littile Oromia” jedhamtee beekamtu keessatti seeraan barreeffamee mul’ata.
Akka odeessa nu gaheetti, sirni eebbaa maqaa “Oromo Street” kun Sambata dhufu, Fulbaana 12 bara 2015 raawwatama.
Maqaan kun akka kennamuuf yaada duraa kan dhiheesse nama dhalootaan Somaalee ta’e, Abdii Warsamee ture. Abdiin yaada kana kan dhiyeesse magaalattii keessatti Oromoo fi Somaaleen heddumminaan waan argamaniif karaan th “Street South between Cedar Avenue and 15th Avenue South” jedhamu maqaa Oromootiin akka moggaafamu gaafate.
Itti dabaluunis, karaan “street between 6th Street and Cedar Avenue to 15th avenue South,” jiru immoo maqaa Somaaleetiina kak moggaafamu yaada dhiyeesse.
Yaada kana irratti gaafa Waxabajjii 12 bara 2015 marii fi falmiin karaa hundaan irratti taasifame. San booda murtiin kun fudhatamee raggaasifame.
Yeroo ammaa kanatti kutaa bulchiinsa Minisotaa keessa qofaa Oromoo gara 40,000ol ta’an akka jiraatan tilmaama.
Oromooti kunneen kanneen dhiibbaa fi hiraarsaa siyaasaatiin biyya dhaloota isaanii, Oromiyaa, Afrikaa Bahaa irraa bara 1980moota keessaa eegalee dahannaa argachuun qubatan ta’uun beekamaadha.
Oromiyaan jaaraa 19ffaa keessa garbummaa Habashaa jalatti kufuun beekamaadha. Ummati Oromoos bilisummaa isaa deebifachuuf qabsoo amraalessa gaggeessaa jira.
Sagantaan guyyaa eebba karaa Oromoo magaalaa Minneapolis kun Oromo TV irrattis gabaafamee jira.
Previous Previous post: የጋምቤላን ክልል ለመገንጠል ሲንቀሳቀሱ ተደርሶባቸዋል የተባሉ ተጠርጣሪዎች ተከሰሱ
Next Next post: Oduu Battalaa:Ogeessi Olaanaa Jila Oromiyaa Gane